Wararka Maanta: Axad, Jan 20, 2013-Maamulka Gobolka Hiiraan oo Sheegay in la Xoojinayo Ammaanka Magaalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan
Guddoomiye ku-xigeenka arrimaha nabad-galyada maamulka gobollka Hiiraan Axmed Cismaan C/dalla Inji oo warbaahinta la hadlllay ayaa sheegay in la magacaabay guddi ka kooban sida uu sheegay 60 xubnood oo u tagan in ay ka shaqeeyaan nabad-galyada xaafaddaha magaalada Baladweyne iyo arrimaha la xiriira hormarinta adeegyada bulshada.
‘’Afarta xaafadood ee magaalada ka kooban tahay, xaafad kasta waxaa ka howlgali doona 15 xubnood oo u xil saaran la socoshada nabad-galyada xaafaddaas, iyaga ayaana lagala xisaabtamayaa hadba arrimaha amaanka ku saabsan ee xaafada ku soo kordha,’’ ayuu yiri Axmed Inji.
Xiliyada habeenkii ayaa lagu arkayaan magaalada ciidamo ka tirsan kuwa maamulka gobollka Hiiraan oo si gaar ah isha ugu haya dhaq dhaqaaqa nabad-galyada iyo falalka ka dhan-ka ah amaanka, waxaana hadda muuqata in ciidamadaas lagu kordhiyay guddi ay xaafadduhu leeyihiin oo kala shaqeyn doona amaanka.
Saraakiisha ciidamada Jabuuti ayaa kulamo joogta ah la qaata waxgaradka iyo odayaasha magaalada Baladweyne iyaga oo iska xog wareysanaya xaaladaha nabad-galyada iyo haddii ay jiraan arrimo u baahan in deg deg looga howlgalo.
Dadka ku dhaqan magaalada Baladweyne ayaa siweyn u soo dhaweeynaya talaabada ay wadajirka uga qaadeen saraakiisha maamulka gobollka Hiiraan iyo kuwa Jabuuti sugida amniga.